UMphathiswa waseSeychelles uncoma isikhokelo sabakhenkethi ngokuzinikela kwimpumelelo yokhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » UMphathiswa waseSeychelles uncoma isikhokelo sabakhenkethi ngokuzinikela kwimpumelelo yokhenketho
Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Umphathiswa wezokhenketho waseSeychelles uhlangana nabakhokeli babakhenkethi
Kwintlanganiso ebibanjelwe eBotanical House ngolwesiHlanu, nge-27 kaAgasti 2021, nabakhokeli babatyeleli ukuxoxa ngemiba ephathelene norhwebo lwabo, uMphathiswa Wezangaphandle Nezokhenketho, uSylvestre Radegonde uvakalise ukoneliseka kwakhe kukuba, njengamanye amaqabane, eli qela lezokhenketho iingcali zizinikele kwimpumelelo yeshishini.
I-ajenda ibandakanya inkxalabo ebekwe phambili ngabakhokeli babakhenkethi.
UMphathiswa uRadegonde uqinisekise abakhokeli babakhenkethi ukuba iSebe lezoKhenketho lisebenza ngokubambisana neearhente ezininzi ukusombulula imiba eyahlukeneyo abajongana nayo.
Oku kubandakanya ukuphuhlisa iimveliso ukuhenda iindwendwe ukuba ziphonononge iinkonzo ezahlukeneyo kunye nezinto ezinomtsalane ezikhoyo, ukhuseleko, uluhlu lweerhafu zeziqithi, kunye nokunye.
Umphathiswa u-Radegonde uthe, "Inye into ephindaphindayo kwiintlanganiso zethu namaqabane kukuzinikela kwabo kwimpumelelo yeshishini lethu. Ndonwabile ukuba sonke sibonakala ngathi sikwiphepha elinye apho singathanda ukuba le shishini liye khona. ”
Kwi-ajenda yengxoxo kwintlanganiso ebizinyaswe nguNobhala oyiNtloko wezoKhenketho (i-PS), uSherin Francis, kunye namanye amalungu eSebe, ibiyinkxalabo eyabekwa ngabakhokeli babatyeleli nokwabelana ngezisombululo ezitsha zokujongana nemiceli-mngeni ekhoyo kwicandelo. ijonge. Oku kubandakanya ukuphuhlisa iimveliso zokurhwebesha abatyeleli ukuba baphonononge iinkonzo ezahlukeneyo kunye nezinto ezinomtsalane ezikhoyo kwindawo ekuyiwa kuyo, ukunqongophala kwezixhobo, ukhuseleko, uluhlu lweerhafu zeziqithi, iindwendwe kunye nemigaqo kunye nokukhathazeka kwendalo njengongcoliseko.
Umphathiswa u-Radegonde uqinisekise abakhokeli babakhenkethi ngokuzimisela nokuzibandakanya kwakhe, eqinisekisa ukuba iSebe lezoKhenketho lisebenza ngokubambisana nee-arhente ezininzi ukusombulula imiba eyahlukeneyo abajongene nayo kunye nokudala amathuba eminye imisebenzi enengeniso kwishishini lokhenketho.
“ISebe lezoKhenketho lixoxa neOfisi kaSodolophu waseVictoria kunye neSebe lezeNkcubeko, phakathi kwezinye izinto, ukuqinisekisa ukuba ikomkhulu lethu elincinane kunye nezinye iindawo ezinomtsalane zinika amava esiqalo akhunjulwayo esiCreole kubakhenkethi bethu. Eminye imiba exhalabisayo ebonakaliswe ngabakhokeli bethu bakhenketho iyaqwalaselwa kungoku nje lisebe lethu ngamacandelo anoxanduva nakwimicimbi esijongene nayo, iingxoxo ezinje ngezi bonelela ngeqonga lokufumana izisombululo ezihlangeneyo, ”utshilo uMphathiswa uRadegonde.
UPS Francis kwelakhe icala wathi le ngxoxo ibisexesheni ngoba ivumele iqela lakhe ukuba lichonge imiba ecinezelayo echaphazela abakhokeli babatyeleli bengingqi ngokuhambelana nezinto eziphambili kwiSebe lezoKhenketho kuphuhliso lweemveliso ezintsha zeshishini.
“Le ntlanganiso iveze izinto ezininzi ezinokwenza indawo ekuyiwa kuyo ibe yeyentengiso ngakumbi ngezindululo zala maqela mabini. Kwicala lethu, sizibophelele ekusebenzeni nezikhokelo zethu zokhenketho ukwandisa ukubonakala kwazo kwiwebhusayithi yethu kunye nezinye izixhobo zokuthengisa. Kuyakhuthaza ukuba injongo yethu efanayo kukuphucula amava abatyeleli, kwaye ngenxa yoko iSebe lezoKhenketho likwanikezela ngenkxaso yalo kwiiprojekthi ezahlukeneyo esiziqhubayo ngoku ukuvala izikhewu ezikhoyo kwiimveliso zethu, ”utshilo uNkosikazi Francis.
Seytshels kubalwa izikhokelo ezizimeleyo ezikhuselekileyo ezikhuselekileyo ezisebenza kufutshane neMahé, Praslin kunye neLa Digue.